Interview with GS of WLB- Part 1 ~ Htet Aung Kyaw
Interview with GS of WLB- Part 1
7:15 AM Htet Aung Kyaw No comments
“GZ တွေကြားမှာ ကျား-မ ခွဲခြားမှုမရှိတော့ပေမယ့် အရင်မျိုးဆက်တွေကြားမှာ ရှိနေဆဲပါ”
တော်လှန်ရေးမျိုးဆက်သစ် GZ တွေကြားမှာ ကျား-မ ခွဲခြားမှုမရှိတော့ပဲ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်မှုကိုလက်ခံလာပေမယ့် အရင်မျိုးဆက်တွေကြားမှာတော့ ခွဲခြားမှုရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုကို လက်ခံဖို့ အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးလို့ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်-မြန်မာနိုင်ငံ (WLB) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်ဆဲဆဲ ကပြောပါတယ်။
နွေဦးတော်လှန်ရေး ၈ လတာကာလ ဦးဆောင်မှုအခန်းမှာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပါဝင်နိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး BNN သတင်းဌာနက ဦးထက်အောင်ကျော်နဲ့ မေးမြန်းခန်းအတွင်း သူမက အဲဒီလိုဖြေဆိုခဲ့တာပါ။
အခုထုတ်လွှင့်ပေးမယ့် မေးမြန်းချက် ပထမ ပိုင်းမှာတော့... နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှုနှုန်း တိုးလာတာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဦးဆောင်မှုအခန်းမှာ အမျိုးသမီးဦးရေ နည်းနေဆဲလား၊ တပ်ပေါင်းစု NUCC မှာ အားလုံးပါဝင်ခွင့်ရမှာလား၊ GZ တွေအပေါ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ အားပေးမှုက ဘာကြောင့် အရှိန်မကောင်းသေးတာလဲ... စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေး တင်ပြထားပါတယ်။
(နွေဦးတော်လှန်ရေး ရှေ့အလားအလာနဲ့ အမျိုးသမီးတွေပါဝင်တဲ့ အနာဂတ် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအကြောင်း ဆွေးနွေးချက်ပါဝင်မယ့် ဒုတိယ ပိုင်းကိုတော့ မနက်ဖန်ညမှာ ဆက်လက် ထုတ်လွှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်)။
Interview with Saw Han Ngwe Oo (LGBT) Part 2
Interview with Saw Han Ngwe Oo (LGBT) Part-1
Interview with U Bo Hla Tint (ASEAN- NUG) Part- 2
Interview with U Bo Hla Tint of (ASEAN-NUG) Part 1
Interview with Khin Omar of Progressive Voice- Pa...
Interview with Khin Omar of Progress Voice- part 1
Interview with U Aung Myo Min of NUG.
Interview with U Myo Win of PPST- Part 2
Interview with U Myo Win of PPST- Part 1
Interview with U Aung Thu Nyein
Interview with Chairman of Myanmar Cycling.
Dr Tint Swe Part 3
Dr Tint Swe Part 2
Dr Tint Swe Part 1
MMS Part 2
MMS Part 1
Interview with Min Ko Naing part 1
Interview with Aung la Nsang
Interview with Min Ko Naing part 2
ABIA Part 2
ABIA part 1
Interview with Chairman of DPNS- part 2
Interview with Chairman of DPNS- Part 1
Interview with Wai Wai Nu- Part 3
Interview with Wai Wai Nu- Part 2
Interview with Wai Wai Nu- Part 1
Interview with WLB- part 2
Interview with Burma News International (BNI)